cdlibre.org: chirongwa cheSpanish chekuparadzira yemahara software | Linux Vakapindwa muropa
cdlibre.org: chirongwa cheSpanish chekuparadzira software yemahara
Bartholomew Sintes Marco, purofesa weValencian, ndiye mugadziri weprojekiti cdlibre.org, basa rine chinangwa chekuzivisa nekuparadzira makomputa matsva e software yemahara kunyanya kune vashandisi veWindows, kunyangwe iwe zvakare uine anonakidza mapakeji eLinux pane iyo saiti. Kana iwe ukawana iyo webhusaiti iwe unowana matsva matsva esoftware kurodha pasi. Dzese dzakasununguka uye dzakanyorwa chete yemahara software.
En cdlibre.org une katarogu yakazara yaungasarudza nayo zvaunofarira. Pakati pezvikamu zve software iwe yaunogona kuwana ndeyenyeredzi, odhiyo, dhatabhesi, mitambo, kusimudzira webhu, hofisi otomatiki, dzidzo, mafonti (mavara), grafiki (dhizaini), Internet, mitambo, masvomhu, mameseji edhitaira, chirongwa, zvinoshandiswa, multimedia. uye Windows. Muchikamu ichi chekupedzisira iwe unowana madhiraivha kana akavhura madhiraivha uye mamwe mapakeji.
Kana iwe ukawana chero chavo, unogona kuwana ese rondedzero izere yemapakeji akasanganiswa mune ino chikamu, ine chinongedzo kune yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti, tsananguro pfupi, vhezheni, saizi yepakeji, dhawunorodha chinongedzo, mutauro mune iyo yakati pasuru iripo, mune iyo muunganidzwa DVD iyo inosanganisirwa, uye zvakare ruzivo rwekuenderana, kana inoshanda yeWindows chete kana inowanikwawo kuLinux.
Iwe unogona zvakare kunyorera kune tsamba yekutsva uye kuwana iyo yekuodha nzvimbo munzvimbo kuunganidzwa. Iwo maumbirwo haasi chimwe chinhu kupfuura ISO mifananidzo yekupisa kune CD kana DVD, zvinoenderana nekuwedzeredzwa, nemapakeji echimwe chikamu, kana iwe usiri kuda kurodha pasi imwe neimwe. Semuenzaniso, DVD-Chirongwa ine huwandu hwezvishandiso zvevagadziri, DVD-Dzidzo, nezvimwe.
Kubva kuLxA isu taida kushambadzira iri basa raBartolomé iro rinounza vashandisi veWindows padhuze nerusununguko, uye batsira munharaunda, apo ichiitawo kuwanda kwemapurojekiti esoftware anozivikanwa kune vashandisi veLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » cdlibre.org: chirongwa cheSpanish chekuparadzira software yemahara
Iyo peji rakakura, iro rave richishanda kweakawanda, mazhinji makore.
Yaive yangu yekuenda-saiti yekurodha pasi software kana uchishandisa Windows.
Naiye ndakadzidza kuti zvaive zvisina basa kuti pirate zvirongwa, uye kuti yemahara software yaivepo.
Ini ndaive pane yavo yekutumira tsamba kwenguva yakareba uye ndakagamuchira iyo nhau uye shanduro shanduko.
Nguva nenguva ndinomushanyira, sezvo ndichinaye mumabhukumaki.
Yakaburitsa vhezheni itsva ye Nextcloud 16 ziva nhau dzayo